ရေးထုံးနည်းနာအဖြာဖြာ (၂) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 1, 2014 at 17:01 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
The Connotation of Opportunistic
opportunistic ဆိုသည့်စကားလုံးသည်ပြဿနာပေးတတ်သည်။ မူရင်းအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများပင် သုံးစွဲရာတွင်အခက်အခဲတွေ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ အောက်ပါဥပမာတို့ကိုကြည့်ပါ။
1. A radio advertisement telling listeners, “now is an opportunistic time to invest in real estate.”
ရေဒီယိုကြော်ငြာတစ်ခုမှပရိတ်သတ်အားပြောနေပုံ။ “ယခုအချိန်ဟာ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်”
2. A television host defending someone against the charge of “being opportunistic.” The host argued, “everyone should be opportunistic because it would be stupid to throw away opportunities.”
ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တင်ဆက်သူမှ တစ်ယောက်ယောက်အား “အခွင့်အရေးသမား” ဟုစွပ်စွဲခြင်း အားခုခံချေပနေခြင်း “လူတိုင်းဟာအခွင့်အရေးယူရပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခွင့်အလမ်းကို လွှင့်ပစ်သူဟာ မိုက်မဲရာကျလိမ့်မယ်။”
၄င်းဥပမာနှစ်ခု၏ပြဿနာမှာ opportunistic ဆိုသည့်စကားလုံး၏အဂယက်အနက် အား လူအများသိထား၊ လက်ခံထားသည့် အနှုတ်သဘောဆောင် အဓိပ္ပါယ်နှင့်သုံးမထားခြင်းဖြစ်သည်။
opportunistic: Taking immediate advantage, often unethically, of any circumstance of possible benefit. (American Heritage)
opportunistic: Exploiting opportunities with little regard to principle or consequences. (Merriam-Webster)
အောက်စဖို့ဒ်အဘိဓါန်ကတော့ “involving, displaying, or characterized by opportunism.” ဟုပြဆိုထားကာ opportunism ဆိုသည်အား “the practice or policy of exploiting circumstances or opportunities to gain immediate advantage… with the implication of cynicism or lack of regard to principles.” ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
အဆိုပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ opportunitist သည် မလိုလားအပ်သည့် အခွင့်အရေးရယူခြင်း၊ ယင်းအပြုအမူကိုပြုသည့်ဝါဒဟုသိသာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့လောကတွင်ပင် ကောက်ယူချက် လွဲမှားသည့်အဓိပ္ပါယ်မျိုးနှင့်အရေးအသားများကို Maeve Maddox က ရှာဖွေ ထောက်ပြထားသည်။
An investing site has as its tagline: “Emphasizes an opportunistic, value-oriented and risk-controlled approach to investments.”
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအင်တာနက်ဆိုက်တစ်ခုက လက်သုံးစကားထား၏။ “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် အခွင့်အလမ်းကိုဆုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တန်ဖိုးရှေ့ဆောင်ခြင်း နှင့် ဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင်ထိန်းချုပ်သည့် ချည်းကပ်နည်း ကိုအသားပေးသည်။”
A wrestler preparing foramatch says, “I don’t want to think too much in there. I want to be more opportunistic and let it flow.”
ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေသည့်နပန်းသမားတစ်ဦးကပြောသည် “အဲဒီမှာ(ပြိုင်ပွဲမှာ) သိပ်မစဉ်းစားချင်ဘူး။ ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအပိုင်အသုံးချပြီး အသင့်လိုက်သွားချင်တယ်။”
အခွင့်အလမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအများအပြားသည် ob portum veniens (လေ၏မျက်နှာသာပေးမှုနှင့်အတူ) ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်သည်။ (ဆိပ်ကမ်းတွင်အကျိုးအမြတ်၊ အခွင့်အလမ်းများရှိနေသည်) ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် မူရင်း လက်တင်ဘာသာစကားစုမှ ဆင်းသက်လာကြသည်။
opportune: adj. Appropriate or suitable foraparticular action; fit, convenient. အချိန်သင့်။ အခါသင့်။ အချိန်ကိုက်။
opportuneness: noun The fact or quality of being opportune (in various senses); timeliness. အချိန်သင့်၊ အခါသင့်၊ အချိန်ကိုက်ဖြစ်ခြင်း။
opportunely: adv. In an opportune manner; suitably, conveniently. အချိန်သင့်စွာ၊ အခါသင့်စွာ၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ။
အဆိုပါစကားလုံးများတွင်တော့ opportunistic ကဲ့သို့ ရှုတ်ချချိုးနှိမ်သည့် ဂယက်အနက်မျိုးမပါဝင်ပေ။
ဥပမာ- the radio announcer might have said “now is an opportune time to invest in real estate.” “အခုအခါသမယသည် အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။”
the more parent visitors we have, the more they trust us and vis-à-vis.ဟူသည့်စာကြောင်း သည် သတင်းစာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ ကျောင်းသားမိဘများ အား ၄င်းတို့၏သားသမီးများ၏ စာသင်ခန်းများသို့ လာရောက်လေ့လာရန် တိုက်တွန်းသည့် ကျောင်းတစ်ခု၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်က ကျောင်းအုပ်ကြီးသည် “ကျောင်းသားမိဘများပိုလာလည်လေ၊ သူတို့ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ယုံကြည်မှုပိုလေ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် မိဘများ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုယုံကြည်လေ သူတို့ပိုလာလည်ကြလေ” “the more parent visitors we have, the more they trust us and vice versa.” ဟုရေးလိုရင်းဟုထင်ပါသည်။ အဆိုပါ အသုံးနှစ်ခုတစ်ခုတည်းသော တူညီချက်မှာ လူနားမလည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
vis-à-vis (အကြမ်းဖျင်း ဗီးစ်ဆာဗီး ဟုအသံထွက်သည်) သည် နာမ်အနေနှင့်
1.aperson orathing situated opposite another. ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိလူ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခု Example: At the table, my vis-a-vis wasawoman dressed all in black and wearingaveil.
2. one’s opposite number or counterpart. နှင့်နှိုင်းစာလျှင်၊ အခြားတစ်ဖက်မှ အဆင့်တူပုဂ္ဂိုလ်၊ အရည်အသွေးတူပစ္စည်း Example: At the international conference of editors, my Russian vis-a-vis wasashort, chubby man withacheerful countenance andaready laugh.
3.ameeting. တွေ့ဆုံခြင်း Example: Reggie’s first vis-a-vis with the new commander left him shaking.
preposition အနေဖြင့် vis-à-vis သည် မျက်နှာခြင်းဆိုင် “face to face with,” သို့မဟုတ် in the “in relation to” နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
At the town meeting,afarmer sat vis-à-vis the Mayor.
The citizens had called the meeting vis-à-visaproposed redistricting.
adverb, အနေဖြင့် vis-à-vis သည် ဆန့်ကျင်ဖက်၊ မျက်နှာမူလျက်“opposite, so as to face each other.” အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Example: On the mantelpiece the actor’s two Oscars stood vis-à-vis.
vice versa (အကြမ်းဖျင်း ဗိုက်စ်ဗာဆာ ဟုထွက်သည်။) သည် အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
adverb အနေဖြင့် used to state that what you have just said is also true in the opposite order ရှေ့ကပြောခဲ့သောအကြောင်းအရာနှင့် အပြန်အလှန်တစ်ဖက်ကလည်း မှန်သည်ဟုဖော်ပြရန် သုံးသည်။
He doesn't trust her, and vice versa (= she also doesn't trust him)
သူကသူမကိုမယုံဘူး။ အပြန်အလှန်ပါပဲ။ (သူမကလည်းသူ့ကိုမယုံပါ။)
အချုပ်ဆိုရလျှင် သူတို့နှစ်ခုကိုသုံးမယ်ဆိုရင် သေသေချာချာစဉ်းစားပြီးမှသုံးသင့်ပါသည်။
The important thing is not to say vice versa when what you mean is vis-à-vis and vice versa.
Permalink Reply by UMyo Min on January 5, 2014 at 19:31